Imaanshaha FLoC waxay yeelan doontaa dib -u -dhac yar, laakiin imaatinkeeda lama huraan | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | 11/10/2021 10:31 | La cusbooneysiiyay 14/10/2021 23:04 | Noticias
Maqaallo dhawr ah oo aan halkan ku wadaagnay baloogga aan hore uga soo hadalnay FLoC oo ah farsamo ka Google in asal ahaan is -weydaarsiga raad -raaca isticmaalaha shakhsi ahaaneed iyo faraha si loo aqoonsado koox (koox) oo ku salaysan taariikh -daalacasho la mid ah xubnaha kooxdaas.
FLOC dadka geliyo kooxo ku salaysan dabeecadaha daalacashada ee la midka ah, taas oo macnaheedu yahay in kaliya “aqoonsi kooxeed” oo aan ahayn aqoonsi shaqsi oo keliya ayaa loo adeegsadaa in lagu beegsado. Taariikhda shabakadda iyo gelitaanka algorithm -ka ayaa lagu keydiyey biraawsarka, oo biraawsarku wuxuu soo bandhigayaa hal “koox” oo ay ku jiraan kumanaan qof.
Bishii Janaayo 2020, Google ayaa sheegtay in ay nafteeda siinayso laba sano si ay u hor istaagto cookies-ka saddexaad, si caadi ah ganacsiyadu si ay ula socdaan dadka biraawsarkooda Chrome. Qorshaha Google ayaa ah inuu ka hortago shirkadaha xayeysiiska iyo ururada kale inay ku xiraan cookies-ka biraawsarkaaga bogagga aan shaqeynin:
“Ka dib wada-hadal bilow ah oo lala yeeshay bulshada webka, waxaan ku kalsoonahay in si joogto ah u soo noqnoqoshada iyo jawaab-celinta, hababka asturnaanta iyo heerarka furan sida Qarsoodiga Sandbox-ka ay taageeri karaan shabakad caafimaad qabta, oo xayeysiis ku taageeraysa hab ka dhigi doonta kukiyada dhinac saddexaad oo duugoobay . Marka hababkani ay daboolaan baahiyaha isticmaaleyaasha, daabacayaasha, iyo xayeysiiyaasha, oo ay horumariyaan aaladaha lagu yareynayo xalalka, waxaan qorsheyneynaa inaan joojino taageerada kukiyada dhinac saddexaad ee Chrome. Ujeeddadeennu waa inaan ku qabanno laba sano gudahood. Laakiin keligaa ma yeeli karno, waana sababtaas sababta aan ugu baahannahay nidaamka deegaanka si aan uga qeybgalno soo jeedimahaan. Waxaan qorshaynaynaa inaan bilowno imtixaannada ugu horreeya ee asalka ah dabayaaqada sannadkan, annagoo ka bilaabanayna cabiridda beddelidda iyo inaan sii wadno habaynta.
In la sameeyo, Tafatiraha Chrome wuxuu soo jeediyay wada -hawlgalayaasha waxbarashada isku -dhafan (FLoC) taas oo qayb ka ah sanduuqa ciidda gaarka ah. Injineerada Chrome waxay si weyn ula shaqeeyeen warshadaha, oo ay ku jiraan ururka heerarka webka W3C, aragtiyada Sandbox ee Google iyo ciyaartoy kale oo tiknoolajiyadda xayeysiiska ah ay la yimaadeen. Sida laga soo xigtay Google, qaar ka mid ah fikradahaas waxay u badan tahay in la sii baadho.
Intaa ka dib, noocyo kala duwan iyo kooxo caan ah ayaa ka soo horjeeday FloC iyo jawaabta falcelinta warshadaha, Google ayaa go'aansatay inay dib u dhigto ka saarista taageerada kukiyada dhinac saddexaad Chrome. Baarayaal badan ayaa hadda xannibaya kukiyada raadinta dhinac saddexaad, laakiin Google ma aysan faragelin iyada oo aan marka hore la ilaalin qaabkeeda ganacsi, gaar ahaan FLoC. Si kastaba ha ahaatee, marka la eego falcelinta silsiladda, labadaba ciyaartooyda warshadaha iyo siyaasiyiinta (tusaale sahanka EU -da oo lagu beegsanayo adeegyada tiknolojiyadda xayeysiiska ee Google), Google ayaa tiri "waxaa caddaatay inay waqti badan ku qaadaneyso nidaamka deegaanka si loo gaaro tan."
Google ayaa sheegtay inay heshay "faallooyin la taaban karo" ka socda bulshada webka kadib baaritaankaaga ugu horreeya ee FLoC, oo hadda waxay qaadan doontaa wax yar in farsamadan si weyn loo hirgeliyo. Google ayaa leh tan "waxay u oggolaan doontaa waqti ku filan dood dadweyne oo ku saabsan xalalka ku habboon, sii wadista la -shaqeynta maamulayaasha, iyo daabacayaasha iyo warshadaha xayeysiinta inay u haajiraan adeegyadooda." In kasta oo FLoC ay tahay doodda ugu weyn ee Google ee adeegsadaha raadraaca cookie -ka xayeysiiska, haddana maahan xulashadooda kaliya. Shirkadda ayaa sheegtay in "Chrome iyo kuwa kaleba ay soo gudbiyeen in ka badan 30 soo gudbinta, afar ka mid ah soo gudbintana waxaa laga heli karaa Tijaabooyinka Asalka ah."
Google ayaa cusboonaysiisay barnaamijkeeda asturnaanta billaha ah ee sanduuqa sanduuqa si loo muujiyo in shirkaddu dib u dhigtay imtixaanka FLoC laga bilaabo Q2021 2022 (lagu dhawaaqay bishii Luulyo) illaa Q2022 XNUMX. Tijaabinta FLEDGE API, soo jeedinta cusub ee Chrome si ay uga caawiso xayeysiiyayaashu inay dib u hagaajiyaan xayaysiisyada iyada oo aan lahayn cookies-ka saddexaad ee webka ma dhici doonto ilaa rubuca hore ee XNUMX.
Google hadda waxay qorsheyneysaa inay u rogto FLoC daalacashada dhammaadka 2022 (qaybta cagaaran ee khariidadda hoose), ka dibna wajiga taageerada cookie-ka saddexaad ee dabayaaqada 2023, muddo 3 bilood ah.
Muddada "Wadahadalka", oo markii hore loo qorsheeyay inay dhammaato rubuc -saddexaad ee 2021, xilligaas oo "teknolojiyadda iyo tusaalooyinkooda looga doodo goleyaasha sida GitHub ama kooxaha W3C", ayaa la kordhiyay illaa dhammaadka rubuc -afaraad ee 2021. Tani Waxa kale oo ay saamayn ku yeelanaysaa qiyaasta marka la filayo in imtixaanku dhammaado, oo hadda isbeddelaya dhammaadka rubuc labaad ilaa dhammaadka rubuc saddexaad ee 2022.
Intaa waxaa dheer, tijaabinta API -yada qeybta 'cabbir xayaysiiska dhijitaalka ah' ayaa sidoo kale dib loogu dhigay Q2022 XNUMX.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Imaanshaha FLoC waxay yeelan doontaa dib -u -dhac yar, laakiin imaanshaheeda waxay noqon doontaa mid aan laga fursan karin